Dongeng lutung kasarung dalam bahasa Malagasi – qnc jelly gamat asli terbaik
Dongeng lutung kasarung dalam bahasa Malagasi
20 November 2016 19 November 2016 qncjellygamatasliterbaik
Indray andro, ny fiandrianany ny mpanjaka natolotra ny seza fiandrianana ho Purba Sari Ayu Wangi. Na izany aza, noho ny Purba Sari dia ny zaza, dia natao ny voa ‘ny fanjakan’ Purba Rarang. ny mpanjaka avy eo am-ponja sisa ny mpanjakavavin’ny. Noho ny fahadisoam-panantenany, Purba Purba Sari Rarang baiko bedang nohosorana mainty, ary avy hatrany sesitany tany amin’ny ala ny T. Cupu Mandala.
Minda Tersebutlah Tompo any an-danitra. Indray alina dia nanonofy mihaona tsara tarehy any Buana Pancatengah andriambavy. Vokatry ny Tompo Minda manao zavatra izay tsy tsara, dia voaozona ny ho rajako.
Nilaza Ageung Tapa King, te hihinana hena rajako. Purba Rarang nandidy Aki avy hatrany Panyumpit ny gidro hena natolotra tamin’izany andro izany. Panyumpit Aki avy hatrany any amin’ny ala. Ary nony efa ho hariva ny andro, dia nahita gidro amin’ny hazo. Aki Panyumpit inona ny tsy nampoizina, raha ny fandehany fa ny gidro afaka miresaka, ary nangataka fa natsangany toy ny zaza.
Ny tena marina dia ny Fahatongavana ho nofo ny Guru langur Minda. Taty aoriana, Aki panyumpit langur hanolotra azy ho any an-dapa. Ankoatra izany, ny gidro dia natolotra ho an’ny mpanjaka. Fa ny gidro nametra-pialàna tsy afaka hamono azy. Nametra-pialàna avy hatrany nanolotra izany indray ho any amin’ny fahiny Rarang langur. Na izany aza, Purba Rarang langur nandà izany, ary manaiky azy ho Purba Sari.
Sari Purba manaiky azy io tamim-pifaliana langur. Ny gidro ela dia niaiky fa ny andriambavy no zanakavavy dia nitady. Ihany koa izy nifidy ny handahatra any Sounane Ambu, ka niverina indray Purba Sari. Ary niaraka tamin’izay Toy izany koa, Sari Purba niverina tany am-boalohany. Sari Purba fiovana ela dia tonga Purba Rarang. Dia tezitra ka nandidy Purba Sari manao zavatra, ny loza mitatao ny fanamelohana ho faty. Anisan’izany Lubuk Sipatahunan nipoitra nandritra ny alina. Purb Sari miaraka amin’ny fanampian’ny Tompo Minda, foana ny mankatò ny didy otu ara-potoana. Ary nanao Purba Rarang miha tezitra.
Farany, Sari Purba Purba Rarang sarotra ny hitondra ao an-tia tsirairay avy. Purba Rarang resy lahatra fa amin’ity indray mitoraka ity dia handresy, satria ny ankizivavy, Indrajaya, dia Knight. Na izany aza, ahoana ny momba ny hoe: raha ny fandehany langur tonga nofo tahaka ny tsara tarehy sy ny mahery fo andriana. Long tantara fohy, Sari Purba i dipersunting ny Master Minda ary ho sambatra.
Ary izay no Folklore an’i West Java, Kasarung. Ny ara-pitondrantena dia afaka mabil ny Folklore ambony dia: “fikasany rehetra da fahotany tsy hambinina, ny mifanohitra dia mitondra mankany amin’ny ratsy”.
Tulisan SebelumnyaDongeng lutung kasarung dalam bahasa Latin
Tulisan SelanjutnyaDongeng lutung kasarung dalam bahasa Malta